Letter from Africa: Snapping at the heels of Zimbabwe's 'crocodile' - BBC News
It's difficult to know where the blame lies at this stage, but a cloud of angst now hangs above a country heading into an unpredictable election which up until now had been marked by a lack of animosity, violence and anger.
Within three months of his unceremonious removal, his long-term rival, opposition leader Morgan Tsvangirai - a man who had been beaten and imprisoned numerous times during his career for daring to challenge Mr Mugabe - died aged 65.
There are now more than 120 political parties registered and, this time around, there are likely to be 23 candidates to choose from on the ballot - making it the longest in Zimbabwe's history.
On the other hand, Mr Mnangagwa, Mr Mugabe's successor and the ruling Zanu-PF party's candidate, has fully embraced Twitter and Facebook - with his supporters also trying to show that he is truly a man of the people after posting photos of him standing in a queue to buy some fast-food chicken last week.
Skip Twitter post by @sure_kamhunga
End of Twitter post by @sure_kamhunga
A few of the millions of Zimbabweans in the diaspora have also returned to try their luck - or perhaps relaunch their careers - including musician and sculptor Bryn Mteki and one of a handful of female candidates, Melbah Dzapasi.
"Zimbabweans have been enjoying the novelty of getting to know the eclectic mix of contenders"
However, the 75-year-old Mr Mnangagwa's main rival is likely to be MDC Alliance leader Nelson Chamisa, who is 35 years his junior.
His blips and blunders during the campaign so far have been entertaining voters - particularly the claims of bringing bullet trains to Zimbabwe, meetings with US President Trump and crafting Rwanda's ICT policy, which have been denied by US and Rwandan officials.
Video Making music: Zimbabwe's mbira